IiNkonzo zePlasma kunye neNkonzo yokuSika iiLangatye kunye noMvelisi | Ukwenziwa kwentsimbi yeHengli
Imveliso kaHengli isebenzisa oomatshini beplasma be-CNC. Itekhnoloji yokusika iPlasma isenza sikwazi ukusika intsimbi ngobunzima be-1… 350 mm. Inkonzo yethu yokusika iplasma ihambelana nokuhlelwa komgangatho EN 9013.
Ukusika iPlasma, njengokucheka ilangatye, kufanelekile ukusika izinto ezinobunzima. Uncedo lwayo ngaphezulu kokugqibela lithuba lokusika ezinye izinyithi kunye neealloys ezingenakwenzeka ngokusika ilangatye. Isantya sikhawuleze kakhulu kunokusika ilangatye kwaye akukho mfuneko yokuba shushu kwangaphambili isinyithi.
Iworkshop yokuPrinta yasekwa ngo-2002, le yeyona workshop yokuqala kwinkampani yethu. Malunga nabasebenzi abali-140. Iiseti ezili-10 zokucheka ilangatye, iiseti ezi-2 zoomatshini bokusika iplasma ka-CNC, oomatshini bokushicilela abali-10 bomsinga wamanzi.
Ingcaciso ye-CNC Flame Cutting Service
Izixhobo: Iifayile ezili-10 （4/8 imipu）
Ukucanda ubukhulu: 6-400mm
Itheyibhile yokuSebenza: 5.4 * 14 m
Ukucaciswa kwe-CNC Plasma Cutting, Ukulinganisa kunye neNkonzo yokuYila
Izixhobo: Iiseti ezi-2 （2/3 zemipu
Uluhlu lweTafile: 5.4 * 20m
Ukusika isinyithi: intsimbi yekhabhoni, intsimbi engenasici, ubhedu, ialuminiyam kunye nezinye izinyithi
Izixhobo: Iiseti ezili-10
Ifaka isicelo soku: ukulinganisa kunye nokwenza
Izinto eziluncedo zokusika kwePlasma
Ixabiso eliphantsi-Esinye sezibonelelo ezinkulu lixabiso eliphantsi lenkonzo yokusika iplasma xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokusika. Ixabiso elisezantsi lenkonzo livela kwimimandla eyahlukeneyo-iindleko zokusebenza kunye nesantya.
Isantya esiphezulu -Iinkonzo zokusika iPlasma yenye yezona zibonelelo ziphambili kukukhawuleza kwayo. Oku kubonakala ngakumbi ngamacwecwe esinyithi, ngelixa ukusika kwe-laser kukhuphiswano xa kuziwa ekusikeni iphepha. Isantya esandisiweyo senza ukuba kuveliswe izixa ezikhulu ngexesha elinikiweyo, ukunciphisa iindleko kwinxalenye nganye.
Izidingo zokusebenza eziphantsi-Enye into ebalulekileyo yokugcina amaxabiso enkonzo ephantsi. Iiplasma ezisikiweyo zisebenzisa umoya oxineneyo nombane ukusebenza. Oku kuthetha ukuba akukho zixhobo zibizayo ezifunekayo zokuhamba nesicoci seplasma.
Egqithileyo IZiko loLungiselelo
Okulandelayo: Ukugqitywa kweNkonzo yoNyango